IWholesele i-Ultra Thin 10-500 Wattage i-LED uMvelisi wokukhanya koKhukula kunye noMboneleli |Yakholite
I-Ultra Thin 10-500 Wattage ye-LED yokukhanya koKhukula
I-YOULITE LG189 isibane sesikhukula se-LED ngokungathandabuzekiyo sesinye sezikhanyiso eziphezulu ze-LED namhlanje.Iimethrikhi ezinamandla, imisebenzi egqibeleleyo, kunye nenkangeleko entle zizinto eziyenza ibe yodwa.
Nazi ezinye zezibonelelo eziphambili zoMkhukula wokukhanya LG189:
Gqibezela uthotho:I-10-500W igcwele amanzi akhoyo.Phantse naluphi na umbane owufunayo, kwaye ukuya kuthi ga kwi-500 ye-wattages yamandla inokuhlangabezana neemfuno zakho ezininzi.
Ukukhanya okukhulu: 90lm/w ukusebenza okukhanyayo okuphezulu.Izibane ezibalaseleyo ze-LED zibonelela ngokukhanya okukhulu, zibonelela ngokukhanya okwaneleyo kubusuku obuthuntu, kwaye zinikeze umoya okhuselekileyo wendlu yakho okanye ishishini.
Ubomi obudespan: iminyaka emi-2 iqinisekisiwe kunye neeyure ezingama-30,000 zokuphila.Izindlu ze-aluminiyam ezinobunzima obunzima, iilensi zeglasi ezipholileyo, zonke ezi mpawu zibonelela ngokhuseleko kunye nokwandisa ubomi besibane.Ubomi benkonzo yokukhanya kwe-LED yangaphandle yi-30,000 iiyure, amaxesha angama-10 ubude kunezinye ii-bulbs zendabuko.
PhezuluInto evikela amanzi: IP65 isiqinisekiso sokungangeni manzi.I-LG189 isebenza kakuhle kwikhephu, imvula, ubushushu, okanye umkhenkce, nto leyo eyenza ukuba ibe lolona khetho lungcono kwiindawo ezingqongileyo ezigqithisileyo.Iqokobhe lesinyithi elihlala ixesha elide linokubuchitha ngokukhawuleza ubushushu ukuze bubugcine bupholile kwaye buxhathise imvula okanye izaqhwithi.
Iinkonzo ezigqibeleleyo: Siye saseka igumbi lethu elimnyama ukuphuhlisa izisombululo zokukhanyisa kunye neefayile ze-IES ukwenzela ukuba abathengi bakwazi ukwenza ukulinganisa ngokulula.Asiboneleli kuphela abathengi ngeemveliso zangaphandle, kodwa sinikezela ngeenkonzo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Izatifikethi zeCE, SAA, CB zonke ziyafumaneka ukuze zibonelele kwiimarike ezahlukeneyo.Ukuba ezinye izatifikethi ziyafuneka, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Ngaphantsi kokhuphiswano olukhulu olunjalo, ixabiso liya kuba yinye yezinto eziphambili phantsi kweemeko zokuqinisekisa umgangatho.Siqinisekile ukuba ngokusebenza okukhuphisanayo, kwaye amaxabiso ethu aya kuba ngowona khuphiswano.I-YOULITE LED yesikhukula ukukhanya LG189 uthotho yeyona nto yakho
Ngaphambili Iindlela eziNye okanye eziMininzi zeMbala ye-LED yesibane seKona
Okulandelayo I-IK08 IP54 Izibane zeCeiling ze-RGB ezingenaManzi
I-IK08 Ukukhanya okuPhezulu okuLungileyo kwe-LED izibane ze-Highbay
Iintloko ezimbini eziPhezulu eziGuqulelayo zoMlilo weMaski kaNgxamiseko L...
I-PIR Sensor Optional Super Bright Izibane zezandyondyo
Umgangatho ophezulu IP65 i-LED eNcedisa isibane sesitalato
3 Igubungela izibane eziziKhethekileyo zezandyondyo ngeSitena
UkuKhanya kweNtendelezo, Camping yangaphandle Solar Led Ligh, Izibane zangaphandle&Inkundla, Isibane sangaphandle soKhukula, Isibane sangaphandle seDonga, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela,